အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီ ချမ်း ၏ ချစ်သူများ......................
Posted by တီချမ်း at 3:11 PM
Rita March 31, 2009 at 4:34 PM
အင်း Addy ရေးမှပဲ ကိုယ်ဟာကိုယ် "ပြင်း" နေတာလား "ပျင်း" နေတာလား ပြန်စဉ်းစားရဦးမယ်။ သေချာတာကတော့ ဒုတိယတစ်ခုပါ။
အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကသာ ပထမတစ်ခုလို့ အထင်လွဲနေကြတာ။
ဒါနဲ့ နေပါဦး။ သေသေချာချာ ကြွားတတ်တဲ့ သူသူ ဆိုတာ "သပသ" ကိုပြောတာလား။ ကောင်းပါပေ့။
ဖိုးစိန် March 31, 2009 at 4:37 PM
အင်းပေါ့..ဖိုးစိန်နာမည်ပါလို့ ... မပါလို့ ကတော့ ချမ်းကို
ပေါင်ချိန် ခွေးခေါင်ဓားစက်နဲ့ ကိုဖြတ်ပြစ်မယ်..
ကျနော့်ကိုအမှတ်တရ ရှိလို့ ပါ..
သဇင်ဏီ March 31, 2009 at 4:43 PM
ခစ်ခစ်.. ချစ်သူများထဲမှာ မီးဏီဏီလဲပါတယ်ပေါ့လေ..
ကျေးဇူးပါတီတီ.. အာဘွား 100 minus 99 :P
အန်တီချမ်း March 31, 2009 at 4:44 PM
အင် မပါလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ
စိန်က ခေါင်းဆောင်မင်းသားပဲဟာ ခိခိ
ချစ်ပါတယ်ကွယ် တီ ကလဲ
အူထဲရှိ အသည်းထဲရှိ ခစ်ခစ်ခစ်
မဆုမွန် March 31, 2009 at 4:48 PM
တော်သေးတယ် ဦးမွန် မပါသေးတာ တီနော် တီ့ကို ဦးက ခင်လို့ ဘာညာကွိကွလေး တွေ ပြောထားတာ ထပ်မစပ်နဲ့နော် ချစ်သောတီ က လိမ်မာတယ် လက်ဖက်နှပ်ပေးမယ် တီချမ်းချစ်သူများဆိုလို့ ရန်အောင် ချစ်သူများကို ယူကျူ့မှာ နားထောင်နေတယ်
အန်တီချမ်း March 31, 2009 at 4:53 PM
Addy: ကွိကွိ ဘာအခုမှကြောက်ပါပီလဲ ဦးမွန်နော်
Addy: ဦးမွန်အကြောင်းတွေ က များနေလို့ ပြောရမှာ ၀တ္ထုရေးနေတယ် ဟိ
နွေးနေခြည် March 31, 2009 at 4:57 PM
တီတီနော် ... တီ့ကို အချစ်ပိုအောင် သိပ်လုပ်တတ်တယ်။
အမှတ်တရလေး ဖြစ်လို့ ကျေးဇူးပါရှင့်
Richard March 31, 2009 at 5:22 PM
Hi Aunty Chan @ Aung Myo
Nice Job, can i share my experiences from here? I have very exotic exp and i hope ur blog will be more popular!
Ur sis from Philippines
မမသီရိ March 31, 2009 at 5:29 PM
ပထမထဲမှာ မပါလို့ စိတ်ကောက်ချင်တယ် နော်..း)
ချမ်း.. က မမ ရဲ့ စိတ်ကောက်တတ်သူ မဖတ်ရသေးဘူး ထင်တယ်.. :P
Phyo Evergreen March 31, 2009 at 6:02 PM
TT PP LL MM KK NN BB
သက်ပိုင်သူ March 31, 2009 at 6:06 PM
အရီးတားကလည်း.. အနော့်နာမည်က ကိုပိုင်ပါ.. သူသူဟုတ်ပါဘူး..
GreenGirl March 31, 2009 at 6:44 PM
10 Q TT LL MM PP KK :P
မေ့သမီး March 31, 2009 at 8:42 PM
ဟင့် တူများကို။ မဟုတ်တာမပြောလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကဗျာရေးပေးလို့ ကျေးဇူး။ အာဘွားရှလူးသွားတယ်။ (အကြည်တော်လေသံနှင့်) :P
ဖိုးဂျယ် March 31, 2009 at 9:43 PM
တီက ကဗျာလေးလဲ တော်တယ်နော်း)
မိုးခါး April 1, 2009 at 9:12 AM
တီချမ်းကိုတော့ ရမ်းရမ်းချစ်တွားဘီ.. :D
ဘာတွေတုန်း April 1, 2009 at 2:06 PM
ဟေးးးး ... တီချမ်းက ဘာဘာကို တကယ်မုန့်ဝယ်ကျွေးမှာလား ..
ဟိ..နောက်တာပါ.. ဘာဘာကို မမေ့မလျော့ ထည့်ရေးတဲ့ အတွက် တီချမ်းကို မုန့်ပြန်ဝယ်ကျွေးဦးမှာ.. အကြွေးမှတ်ထားနော် တီ..
တီတီရေ... ချစ်သူများထဲပါခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတစ်သိန်းးးးး ဒါကြောင့် တီက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာ... ခစ်ခစ်ခစ်
ခေါင်းစဉ်လေးစဖတ် ကတည်းက မာလာ ဆိုတာပါလာမယ်လို့ 